किसान | मझेरी डट कम
tikamilan — Tue, 12/17/2013 - 21:48
जोतेर गोरु हलले सब खेत बारी
ल्याएर अन्न घरमा अरुकै थुपारी
खाँदै थिए कृषकको अरुले कमाई
काड्दैछ हेर पसिना धरती भिजाई । १
को गर्छ ? शुद्धमनले अरुको भलाई
खानै नपाइ यसरी किन यो कमाई ?
गर्छन् अझै गरिबले किन यो पुकार ?
यस्तै थिए गरिबका दुखका मुहार । २
खान्छन् तिनै कृषकका पसिना चुसेर
बन्छन् सबै धनकुबेर् तिनको लुटेर
दुख्खै भए सुख सबै अझ बिर्सिएर
जस्तै भए पनि अझै हिँड फर्किएर । ३
गम्दैगए फगत ती घरमै बसेर
भन्दैगए अरु सँगै रिसले भरेर
उम्ल्यो यसै सकलको खुन चल्मलायो
उठ्यो जुरुक्क मन यो, तन जुर्मुरायाे । ४
समन्तका अघिसरी गर शीर ठाडो !
भन्नै परो सबमिली अब आफ्नु पालो
डस्छौ अझै ? भन तिमी, अब हेपिदैनौ
सानै भए पनि कसै, अब चेपिदैनौ । ५
दुख्खै भए पनि सबै अब टार्नु पर्छ
माथी चडे अझ भने तल झार्नु पर्छ
आफन्त नै भइदिए पनि मास्नु पर्छ
सामन्तकै बुइचढी कन नाच्नु पर्छ । ६
छन्दः बसन्त तिलका
गणः त भ ज ज गु गु
टीका मिलन जी
HomSuvedi — Sat, 12/21/2013 - 08:50
तवाइँ छन्दमा कविता लेख्न मन गर्नुहुन्छ । मलाइ यो जानेर धेरै खुसी लाग्छ । तर तपाइँको छन्द तपाइँले कब्जा गरेको देखिएन । भावमयता भन्दा पनि कविता वर्णन प्रधान लेख्नुहुँदो रहेछ । जे होस् छन्दमा लेख्ने तपाइँको आँट स्तुत्य भएर पनि छन्दमा परिरपक्व हुन भने निकै बाँकी रहेछ । मेहनत पो गर्नु पर्ने बुझे‌ हे मैले ता ।
हो, हिजाज छन्दमा
editor — Sat, 12/21/2013 - 08:57
हो, हिजाज छन्दमा लेख्ने कवि निकै कम भएर होला, प्रत्येक छन्दकविता महत्वपूर्ण लाग्छन् । टिका मिलनजीले मझेरीमा थुप्रै छन्दकविता लेख्नुभा'छ । आशा छ अँझ यस बिधामा परिपक्क रचनाहरू आउने नै छन् ।
tikamilan — Tue, 12/24/2013 - 19:32
सम्पादक ज्यू ,
यो जमानामा छन्दमा लेखेका कविताहरू कुनै समारोहमा सुनाउनु नै हुदैन । त्यस्तो कविता न त कसैले बुझ्छ न त ध्यान दिएर नै सुन्छ । अहिलेको समय भनेको त गजलको मात्र रहेछ, चट्ट छोटा छरिता हुँदारहेछन् । म भने कति गर्दा पनि गजल लेख्न सकिन । गजल लेख्न थाल्यो कविता हुन्छ । हाम्रो साहित्यमा छन्दको प्रयोग हराउदै गएको छ । कतै छन्द लोप भएर पो जाने हो कि भन्ने चिन्ताले गर्दा मैले छन्दमै बल गरेको हुँ । सुझावको लागि पर्खिरहने छु ।
खै ! के गर्नु र होम जी,
tikamilan — Sat, 12/21/2013 - 09:48
खै ! के गर्नु र होम जी, भावनामा बग्न सारै गह्रो पर्दो रहेछ; यहाँ भन्दा माथि जाने त मेरो क्षमता नभएको हो या के हो म बस्तुपरक कविता मात्र रच्न सक्छु । तै पनि म प्रयास चैं अबस्य गर्ने नै छु । सुझावको लागि धन्यवाद !!!!!!
HomSuvedi — Sat, 12/21/2013 - 17:46
मेरो कुरालाइ रेस्पोन्स गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद । कोही ता तँ सुझाव दिने को होस् भनेर फट्कार्दा रहेछन् । तपाइँ सौम्य देखिनुभो । खुसी छु । धन्यवाद । जय होस् ।
मेरो जिन्दगानी तिमी
हिट हुने भा’छन् अचेल
अचेल उता के हुदैछ
कुरा मात्र ठूल्ठूला
विर्खे, दमाई साईला र काजीमान
जान्छु टाढा तिमीदेखि बाटो प्रिय नछेक है